Product Reviews Finday avo lenta
Samsung Galaxy A3 (2016), A5 (2016) sy A7 (2016) Review
Tiako ny lozam-pifandraisana samihafa an'ny Samsung, ary afaka manoro azy ireo amin'ny olona tsy misy fisalasalana, saingy tsy afaka manao toy izany amin'ny famolavolan'ny vokatra ao amin'ny orinasa, mandraka ankehitriny. Izay no hitako voalohany indrindra. Ary indrindra indrindra noho ny OEMs Sinoa no mandondona ny tsenan'ny midadasika miaraka amin'ny fitaovana tsaratsara kokoa ary mahazo ny tsena amin'ny tsena, izay nanery ny mpanjana-jaky Koreana hamerina hamerina indray ny famokarana vokatra ho an'ity tsena manokana ity.
Samsung dia tsy nahavita nampiaiky volana ahy niaraka tamin'ny smartphones Galaxy A tany am-piandohana, na dia ireo finday voalohany aza ny orinasan-dry zareo. Ary io angamba no hany anton-javatra mampiavaka ny fitaovana, satria, raha ny tena izy, dia tsy tafakatra amin'ny fifaninanana izy ireo ary avo lenta be noho ny zavatra natolony.
Na izany aza, dia notanterahana herintaona lasa izay izy ireo, ary ankehitriny dia manana ny mpandimby azy ireo - Galaxy A3 (2016), Galaxy A5 (2016), ary Galaxy A7 (2016) - hiara-milalao. Ary raha ireo vokatra voalohany amin'ny taranaka voalohany kosa dia nanantitrantitra ny endrika, ny mpandova azy dia manana ny endrika, ny endrika ary ny asa. Raha miresaka momba ny asa dia ny orinasan-tserasera koreanina dia nitondra karazana maromaro avy amin'ny tendron'ny Galaxy S ambony ho an'ny A Series (izaho dia hiresaka momba ireo toetra ireo any aoriana any amin'ny famerenana), izay namela ny orinasa hivarotra ny fitaovana vaovao toy ny smartphones avo lenta - jereo ny dokam-barotra Galaxy A Series an'ny Samsung Pakistan, ohatra.
Fanamboarana sy fananganana kalitao
Design-wise, mijery klon Galaxy S6 isika . Eny, miaraka amin'ny New A Series (2016), ny OEM dia nanamboatra ny endriky ny metaly efa taloha ary nandeha niaraka tamin'ny fitaratra sy ny metaly, fa kosa. Tahaka ny Galaxy S6, ireo fitaovana telo A Series (2016) dia misy sary vita amin'ny Gorilla Glass 4 eo anoloana ary ny rambony miaraka amin'ny rindrin'ny alimihetsika misy azy mirahavavy.
Ny glasa anefa dia avy amin'ny karazany 2.5D, izay midika fa bitika kely amin'ny sisiny izy; toy ny iray ao amin'ny Galaxy S7 vaovao , nefa tsy dia manan-danja loatra. Izy io koa dia mametraka ny iray amin'ireo fahasamihafana nananako mikasika ny endriky ny GS6 - satria ny sehatry ny vera dia mampifandray tsy tapaka ao anatin'ilay rafitra, ny fitaovana dia tsy mahatsapa ho maranitra eny an-tanany.
Misy olana roa amin'ny fananana fitaratra amin'ny alàlan'ny smartphone. Ny iray amin'izy ireo dia ny miala amin'ny latabatra, ny fitaovam-pandriana, ary ny lamba fisaonana aza. Araka izany, araka ny azonao an-tsaina, sarotra tamiko ny namaky ny famoahako Twitter ary nijery ny Instagram tany am-pandriana tamin'ny maraina. Ary ny iray hafa dia ny ranom-piraketam-pejy misy ny fanamafisam-peo feno, izay mandrisika ahy adala, ary isaky ny fotoana kelikely dia tsy maintsy nanome azy ireo ny tapa-damba amin'ny t-shirtiko. Na izany na tsy izany, dia tsy hita mibaribary amin'ny loko mareva-doko izy ireo, koa mitandrema izany ao an-tsaina alohan'ny hanaovana ny fividianana.
Ankoatra izay, tokony hilaza aho hoe tena gaga aho tamin'ny fanatontosana ny Gorilla Glass 4; Efa nanandrana ny tetikasa A Series (2016) aho nandritra ny telo herinandro mahery izao, ary tsy misy ratra na scuffs amin'ny iray amin'ireo tontonana vita amin'ny glasy. Hitako ihany koa ny tara-bidy mba hikorontana kokoa amin'ny tànana noho ny metaly miverina, ka izany dia fanampiny. Ny rindrin'ny alim-bary koa dia ao anatin'ny tsy fahampian-tsakafo tsy misy scratches na nicks. Rehefa avy nilaza izany aho dia mbola manoro hevitra anao aho haka tranga ho an'ny iray amin'ireo horonan-tsarin'ny Galaxy A (2016), raha toa ianao miala amin'ny smartphone matetika satria fantatry ny rehetra fa ny jiro dia marefo kokoa noho ny metaly. Tsara kokoa ny miaro tena noho ny manenina.
Ny Series A (2016) dia tonga amin'ny karazany efatra samihafa: Black, Gold, White, ary Pink-Gold. Samsung dia nandefa ahy ho an'ny mainty A3 (2016), fa ny A5 (2016) sy ny A7 (2016) dia singam-bolamena. Ankoatra ny volo fotsy, ny loko hafa rehetra dia tonga amin'ny tontonana mainty hoditra, izay, miaraka amin'ny Super AMOLED, dia mampisongadina endrika tsy miovaova. Ny asa hosodoko, ny tenany, dia tsy toy ny marefo tahaka ny amin'ny Galaxy S6 sy ny S7, ary tsy manamarika ny toetra mampiavaka ny fitaratra - Samsung dia mitazona ny fomba fitondra-jiro mitovitovy amin'ny sain-tsariny, farafaharatsiny amin'izao fotoana izao .
Raha ny seranan-tsambo, ny sensor, ary ny fandefasana ny bokotra dia ny momba azy: any aoriana, manana ny fakantsary kameray lehibe indrindra isika ary ny jiro LED, tsy misy foibe fitohizan'ny fo ao amin'ny andian-tsoa A; eo anoloana, manana ny tanjom-piainantsika sy ny tandindom-pahazavana maivana, ny fakantsary eo anoloana, ny sofina, ny fampisehoana, ny fonosana ary ny kaonty kapohina ankapobeny, ary ny bokotra an-trano miaraka amin'ny solosaina fanodin-tanana mifangaro (A5 sy A7 ihany); Ao ambany, misy mikrôfo, 3.5mm kofehy fanindroany, port MicroUSB, ary ny giro mpandahateny; Ao an-tampony, tsy misy afa-tsy ny mikrôfo faharoa, ary, toy ny GS7 vaovao, tsy misy blastera ao amin'ny IR; ary ny bokotra volume dia hita eo amin'ny ilany ankavia amin'ny endriky ny alimine, raha ny bokotra herinaratra dia eo amin'ny ilany ankavanana - ny totoina telo dia tena manintona amin'ny fahafaha-mahita sy ny toerana tsara indrindra.
Ny isam-ponina dia 5.27 tamin'ny taona 2006. Ny kaodim-paositra dia 68190 .. Jeografia Ny haavon'ilay tanàna amin'ny haavon-dranomasina dia 157 metatra. 172g. Rehefa nanambara ny andiany voalohany A tamin'ny volana desambra 2014 ny Samsung, dia izy ireo no smartphones madinika indrindra noforonin'ny orinasa. Na izany aza, amin'ity indray mitoraka ity, ny fitaovana tsirairay ao anatin'io andian-dahatsoratra io dia kely (amin'ny milimetatra eo ho eo) matevina sy mavesatra kokoa noho ny teo aloha, ary izany no nahatonga ny OEM nizatra tamin'ny battera lehibe kokoa ary nampihena ny kisarin'ny fakantsary teo an-damosiny. Ny fampitomboana fanampiny dia mampitombo ny fahatsapan'ireo fitaovana, ka mahatonga azy ireo ho ambony lavitra. Ny tahan'ny ekirô-to-body amin'ny fitaovana tsirairay dia nihamaro ihany koa; Tena miloko ny kofehy, ary zavatra tsara izany.
Hatreto, ny zava-drehetra dia toa tsara sy mamy, sa tsy izany? Eny ary, tsy izany, nanala ny atidohanao aho tamin'ny fisaintsainana izany. Ary, izao no fotoan'ny zava-drehetra izay tsy mety amin'ny endrika.
Tsy misy amin'ireo fitaovana A (2016) ireo ny fitaovana fampandrenesana LED, ary tsy azoko ny antony nanapahan'i Samsung tsy hampiditra azy io. Toa, tamin'ny firy ny LED no nitombo ny vidin'ny vidiny ary nampihena ny tsenan'ny orinasan'ny orinasa tsirairay? Tsy misy dikany izany, ary izaho, amin'ny iray, mahita ny LED fampahafantarana tena ilaina. Tsy misy koa ny fanehoan-kevitra vibration rehefa manosika hiverina na mamerina ny fanalahidy kapila.
Ary ny torolàlana momba ny fingadam-pihetseham-pandrenesana dia tsy tsara loatra izany, tsy maintsy nilentika ny rantsan-tanako 3-5 avo aho talohan'ny nahombiazan'ilay fitaovana nahatsikaritra ny fingampingako. Nahazo tsaratsara kokoa ny fanekena rehefa avy nisintona intelo aho, ary izany dia tsotra.
Avelao aho hanomboka hilaza izany: ny Galaxy A3 (2016), ny A5 (2016), ary ny A7 (2016) no mandrehitra ny rindran-damba tsara indrindra amin'ny tsenan'ny smartphone midadasika, fotoana.
Ny Galaxy A3 (2016) dia tonga miaraka amin'ny 4.7-inch, HD (1280x720), Super AMOLED misy sary miendrika 312ppi. Amin'ny lafiny iray, ireo rahalahiny lehibe, ny A5 (2016) sy ny A7 (2016), dia feno Full HD (1920x1080), Super AMOLED dia maneho amin'ny 5.2- sy 5.7-inch miaraka amin'ny teboka maherin'ny 424ppi sy 401ppi.
Raha ny fahamendrehana no nahitako olana tamin'ny finday iray - ny resolution HD (1920x1080) tanteraka dia tsotra fotsiny ho an'ny lamina A5 (2016) sy A7 (2016), ary ny HD (1280x720) ho an'ny Ny efitranon'i A3 (2016) amin'ny 4,6 metatra dia ampy.
Ankehitriny, ireo dia tsy ny fampisehoana AMOLED ambony, toy ny hita tao amin'ny Galaxy S sy ny fanoratana ny grenady koreanina; Na izany aza, tsara kokoa noho ny LCD panorenan'ny loka izy ireo, izay azo antoka. Ankoatra izany, noho ny fandaharam-pamokarana tsy misy ilàna azy, dia zava-dehibe sy mahavariana ny zava-niainana.
Ny fonosana Super AMOLED amin'ny fitaovana telo dia manome lanja avo indrindra, haavo, inky mainty ary tsara tarehy tsara tarehy. Raha miresaka ny fomba fijeriny, tsy dia mahatalanjona toy ny amin'ny Galaxy S6 izy ireo, tahaka ny nahitako toto maitso tamin'ny fijerena ny fampisehoana avy amin'ny làlan-dàlana tsy mivoatra - izy ireo dia ao amin'ny bala mitovy amin'ny Galaxy S5. Ambonin'izany, ny palma dia mety ho tsara tarehy sy mamirapiratra, noho izany, ny fijerena ny fampisehoana eo ambanin'ny masoandro tsy miankina na amin'ny alina dia tsy niteraka olana.
Tahaka ny smartphones hafa an'ny Samsung, ny A Series (2016) ihany koa, dia tonga miaraka amin'ny loko efatra samihafa: Fampisehoana mampiseho, AMOLED Cinema, AMOLED Photo, ary Basic. Amin'ny alàlan'ny fanamarihana, ireo fitaovana ireo dia ahafahan'ny profil Adaptive Display afaka alefa, izay mety ho hitan'ny mpisera sasany kely amin'ny oversaturated, ary ho azy ireo dia azoko atao ny manolotra ny sarin'ny AMOLED Photo amin'ny loko kokoa.
Samsung dia manana ny trio amin'ny fitaovana misy fakantsary fakantsary 13-megapixel miaraka amin'ny lamosin'ny f / 1.9, sary fitongilanana sary (afa-tsy ny A3), ary ny fanohanana ny horonantsary Full HD (1080p) amin'ny 30FPS, miaraka amin'ny jiro LED. Ary, tahaka ny tsy misy fitaovana midadasika midadasika fantatra amin'ny rafi-tsary ao aminy, dia tsy hisy ny tarika vaovaon'ny Samsung Galaxy A.
Ny kalitaon'ireo sary dia mifanaraka mivantana amin'ny fehezan-dalàna. Raha manazava ny anao ianao, dia ho tsara ny saryo, ary ny mifanohitra amin'izany - tsotra toy izany. Ny tranga mitovitovy amin'izany dia miaraka amin'ny horonan-tsary, saingy tsy maintsy miteny aho fa ny fanampiana ny OIS dia tena manampy amin'ny fanesorana ireo tifitra.
Ankoatr'izay, hitako fa ny fahamaroan'ny maro dia maro ny fahalemena, ny fiheveran'ny fiara mifantoka ihany koa dia miadana, ary ny fanamafisam-peo dia tandindomin-doza. Ho fanamafisana ny olana momba ny dinam-pamokarana dia nanomboka nitifitra tao amin'ny HDR aho ary nahita olana bebe kokoa. Ao amin'ny HDR mode, Samsung dia nanatsofoka ny famerana farafahakeliny ho an'ny 8 megapixel, fa tsy 13 megapixel, mila segondra vitsy monja ny manara-maso ilay sary, ary tsy misy fomba hahafantarana ny vokatra farany amin'ny endriny - tahaka ny fitaovana tsy fanohanana ny HDR.
Amin'ny fampiasana rindrambaiko, ny mpampiasa interface an'ny tahirim-peo fitahirizana dia mitovy amin'ny iray hita ao amin'ny Galaxy S6, dia mora sy mora ampiasaina. Izy io dia misy karazana fitifirana mialoha ny fametrahana azy: Auto, Pro, Panorama, tifitra maharitra, HDR, Night, ary bebe kokoa azo alaina ao amin'ny magazay Galaxy App. Ary raha manontany tena ianao, ny fomba fiasa Pro dia tsy manankarena toy ny amin'ny smartphones avo indrindra amin'ny orinasa; Ny fanaraha-maso ny tanana dia voafetra ihany ny fandanjana fotsy, ISO, ary ny fijerena. Misy ihany anefa ny Quick Launch, izay ahafahan'ny mpampiasa manokatra ny app ny fakantsary amin'ny alalan'ny fanindry ny bokotra an-tokontany - izy io dia iray amin'ireo toetra tena tiako indrindra amin'ny Android UX an'ny Samsung.
Ho an'ny zavatra rehetra ilainao manokana, ireo fitaovana koa dia manamboatra fifandimbiasam-pandrefesana, 5-megapixel sensor miaraka amin'ny lamosin'ny f / 1.9 ary tonga miaraka amin'ny fàfana fitifirana toy ny Wide Selfie, ny tifitra tsy tapaka, ny alina, ary ny hafa. Ny habetsaky ny smartphones midadasika dia mirehareha amin'ny teboka avo lenta ho an'ny rafitra fantsom-pifaneranana, fa tsy maro ny manana andalana lehibe, izay singa manan-danja ho an'ny selfies mahafinaritra, araka ny hevitro.
Tsindrio eto raha hijery ny santionan'ny fakantsary.
Ny Galaxy A5 (2016) sy ny A7 (2016) dia mihozongozona ny 64-bit, octa-core, Exynos 7580 SoC, ny orinasa Exynos 7580 SoC miaraka amin'ny fikandrana vitan'ny 1.6GHz, dual-core, Mali-T720 GPU amin'ny 800Mhz ary 2GB ary 3GB an'ny RAM LPDDR3. Ny Galaxy A3 (2016), etsy ankilany, dia manamboatra vahaolana maimaim-poana amin'ny chipset iray ihany. Inona no mety hitranga, azonao atao ny manontany? Raha tokony ho 8 metatra, dia misy ihany koa ny four cores ahafahana mamaky azy, ary mitambatra amin'ny 1.5GHz; Ny haavon'ny GPU dia ny 668MHz, ary avy eo dia misy RAM RAM 1.5GB.
Ireo fitaovana telo dia manangona 16GB ny tahirin-tsakafo anatiny, izay ampiasain'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny karatra microSD (hatramin'ny 128GB).
Mazava ho azy fa tsy niandry zavatra hafakely avy tamin'ireo fitaovana ireo aho, ary tsy nandiso fanantenana ahy izy ireo. Niara-niasa tamim-pahalemem-panahy izy ireo isan'andro. Ny zavatra niainako dia tsy navotsotra indrindra, saingy nahatsikaritra kely ny fanakorontanana rehefa nivezivezy avy amin'ny fampiharana iray hafa. Ary ny fampisehoana androany Android dia efa misy, toy ny amin'ny smartphone hafa hafa rehetra, na inona na inona, na ambany izany, na midadasika na avo lenta.
Ny fitaovana tsirairay dia nanao ny fomba fitadiavana samirery, noho ny fahasamihafana amin'ny habetsahan'ny RAM. Ny A3 (2016) dia afaka mitahiry 2-3 apps amin'ny fahatsiarovana ary matetika mamono ilay launcher, ary vokatr'izany ny fantsom-pamokarana manodina. Ny A5 (2016) dia afaka nitazona apps 4-5 ho fahatsiarovana indray mandeha, ary ny A7 (2016) dia afaka nitazona 5-6. Noho ny fampidinana RAM 1.5GB fotsiny, ny Galaxy A3 (2016) dia tsy manohana ny marika Multi-Window an'ny Samsung, noho izany dia tsy afaka mampiasa rindrambaiko anankiroa ianao amin'ny fotoana iray.
Araka ny efa voaporofo tamin'ny lasa, ny GPU mali dia tena mahery. Afaka nizotra mora foana ny lalao maoderina tao anaty sehatra avo lenta aho raha tsy nisy ny fitaovana nipoaka. Noho izany, raha tafiditra lalao ianao dia tokony ho tsara ho anao izany. Na eo aza izany, satria GPU iray ihany ny roa, ny lalao navoaka amin'ny ho avy dia mety tsy hahavita tsara loatra, saingy tsy tokony hanana olana amin'ny iray amin'ireo lohateny amin'izao fotoana izao. Ankoatr'izay, tsy dia mafana loatra ny smartphones, dia nihazakazaka be izy ireo.
Avy ao anaty boaty, ny A Series (2016) dia tonga miaraka amin'ny Android 5.1.1 Lollipop amin'ny farany ny TouchWiz UX farany an'i Samsung. Eny, vao haingana i Google dia nanaparitaka ny mialoha ny fanavaozana ny Android N 7.0, ary mbola mijanona ao amin'ny Lollipop ihany ny fitaovana Samsung. Nanantona ny orinasa Koreana aho mba hanome fanamarihana ofisialy momba ny fanavaozana ny Android 6.0 Marshmallow, hanavao ity fanavaozana ity aho rehefa mahazo valiny aho.
Samsung dia nitazona ny rindrambaiko amin'ny ankapobeny mitovy amin'ny Galaxy S6 miaraka amin'ny fanampim-panafana vitsivitsy sy ny fihoaram-pefy, ka tsindrio eto raha hamaky ny famerenana ny rindrambaiko GS6 an'ny GS6.
Ny Series A (2016) dia tsy tonga amin'ny fomba fanao manokana, Pop-up fahita, antso an-tariby, Tapake motion effect, Multi-Window (A3 ihany), ary ny rindranaserana (A3 ihany). Na izany aza, dia misy FM radio ao amin'ny FM izy io, izay tsy hita ao amin'ny Galaxy S6, na ny Galaxy S7, ka izany dia fandresena ho an'ny sasany. Ary misy ihany koa fomba amam-panao iray eo amin'ny Galaxy A7 (2016).
Fifandraisana sy mpandaha-teny
Ny fifandraisana dia toerana efa napaka ny zoro lehibe indrindra. Ny Galaxy A3 dia tsy miaraka amin'ny fanohanan'ny Wi-Fi maherin'ny roa, ary raha ny Galaxy A5 sy A7 no manao, dia voafetra ihany ny haingana 802.11n - tsy misy haingana haingana, AC Wi-Fi fanohanana. Ary any amin'ny toerana misy ahy, dia tsy misy fomba ahafahan'ny olona mahazo haingam-pandeha haingana amin'ny tambazotra 2.4GHz, noho izany dia mifandray amin'ny tamba-jotra 5GHz ianao, na ianao mifikitra amin'ny fifandraisana an-tserasera tsy azo ampiasaina. Noho izany, ny zavatra niainako tamin'ny Galaxy A3 dia tsy nahafinaritra.
Ny sisa amin'ny fampifandraisan-davitra dia ahitana 4G LTE, Bluetooth 4.1, NFC, GPS ary GLONASS. Misy seranana microUSB 2.0 ho an'ny famerenana sy famenoana ny fitaovana. Ny Samsung Pay fanohanana dia natsangana tao amin'ny A5 sy A7 ihany koa.
Samsung dia namindra ny môdelina mpandahateny avy any ambadiky ny fitaovana, izay midika izany, ny feo dia tsy mionona intsony rehefa mametraka smartphones eo ambony latabatra. Na izany aza, amin'ny toerana vaovao, rehefa milalao lalao amin'ny tontolon'ny taha-tany, ny girera mpandahateny dia mihodidina ny palmie.
Raha ny momba ny kalitao, ny mpandahateny mono dia tena mafy, fa ny feo dia manomboka mihoraka amin'ny avo indrindra. Ankoatra izany, ny profesora feo dia marefo, izay midika fa tsy manana ilay baomba be izany izy. Ny mpandahateny amin'ny Galaxy S6 dia ambony lavitra. Raha olon-kendry ianao, dia misy ny Adapt Sound, ny SoundAlive +, ary ny Amp Amp ampidino ny Samsung Amp + ampiasaina miaraka amin'ny rindrambaiko, izay ahafahanao mamoaka feo malaza.
Ny fiarovana ny fiainam-batana dia tokony ho iray amin'ireo endri-pihetseham-pon'ny New A Series (2016) satria fotsiny miavaka. Ireo fitaovana telo dia mety haharitra anao mandritra ny iray andro, izay midika fa tsy misy fotoam-pivoriana fanampiny mandritra ny andro. Amin'ny A5 sy A7 dia mety ho afaka roa andro ianao, raha tsy hoe mpampiasa mavesatra ianao.
Ny A3 (2016), ny A5 (2016) ary ny A7 (2016) dia mitentina 2,300mAh, 2,900mAh, ary 3,300mAh batteries. Amin'ny ankapobeny, efa ho 3 ora amin'ny efijery aho - amin'ny fotoana miaraka amin'ny A3, 4.5-5.5 ora miaraka amin'ny A5, ary 5-6 ora ao amin'ny A7. Tsy azoko mihitsy hoe inona no nataon'ilay Samsung tamin'ny rindrambaiko, fa ny fotoana aterak'izy ireo dia tsy mampino fotsiny fa tsy mandroaka fotsiny. Mbola tsy nahita fahombiazan'ny bateria toy izany mihitsy aho teo amin'ny smartphone misy taloha.
Ny Galaxy A5 sy ny A7 koa dia miaraka amin'ny teknolojia Fast Loading an'ny Samsung, izay ahafahan'ireo batteries mahazo 50% voampanga amin'ny 30 minitra. Tsy misy na inona na inona ireo fitaovana tonga amin'ny fampitaovana Wireless. Na izany aza, tonga izy ireo miaraka amin'ny Power Saving sy Power Saving Saving Ultes, izay manampy ireo batteries efa mahagaga dia maharitra ela kokoa.
Amin'ny ankapobeny, ny Samsung Galaxy A Series vaovao (2016) dia mitovy amin'ny solo-telefaona midadasika hafa rehetra, afa-tsy ny famolavolana sy ny Super AMOLED. Ary ireo toetra roa ireo dia ny zavatra tokony haparitan'ilay andian-tsarimihetsika eny an-tsena.
Ny smartphones Koreana goavam-be midadasika dia maneso ny fitenin'ny lozisialy Galaxy S, ary tsy isalasalana fa ny Galaxy S6 dia iray amin'ireo smartphones tsara indrindra sy miorina tsara indrindra eto an-tany. Amin'ny ankapobeny, izy ireo dia ny halavan'ny Galaxy S6s, ary tsy zavatra ratsy izany. Ireo olona izay te hividy ny GS6 fa tsy noho ny vidiny be dia be, dia mety ho voasarika amin'ny orinasa vaovao Galaxy A Series.
Ity ny zava-misy: amin'izao fotoana izao, ny A Series vaovao dia azo jerena ao Azia ary vitsy eran-tany ao Eoropa, mbola mipetraka any amin'ny tany amerikana sy any Royaume Uni. Raha toa ka manangona azy ireo amin'ny fomba mahery vaika i Samsung, dia mety ho iray amin'ireo fitaovana fivarotana avo indrindra amin'ny sokajy midadasika izy ireo.
Ny hevitro amin'ny HTC 10 Camera sy Samples
30 Andro miaraka amin'ny iPhone - Andro 23 - Text Precedictive
Inona no Huawei?
Cell Phone na Home Phone Service?
Misy drafitra mandoa vola tahaka anao ve?
Asio DV Digital amin'ny VCR
8 Best Stereos Outdoor ho an'ny Beach, Camping sy Adventure amin'ny 2018
Rock Jaw Alfa Genus Voahangy V2
Free Newsletter Templates ho an'ny printy sy tranonkala
Ny 8 Best Dash Cams hividy amin'ny 2018 ho an'ny Under $ 100
Fitsidihana an-tsokosoko amin'ny fampiasana ny CHOOSE Function Excel
Ahoana no hanafoanana sy hanaisotra ny fifandraisana eo amin'ny Windows amin'ny Windows
Ahoana ny fahazoana kaonty Yandex.Mail amin'ny programa mailaka mampiasa IMAP
Fomba hanampiana ireo kaontin'ny Administrateran'ny Mac anao
Hanova ny "From:" Field - Hotmail Email Tutorial
Mampiasa Endrika amin'ny Illustrator
Ahoana no fomba fanaovana fampirimana sy rindrambaiko ho an'ny vondrona amin'ny iPhone
Ahoana no handraisan'ny spammen ny adiresy mailakao
Manangana ny PC Perfect (famoahana fahatelo) Review
Ny 7 Best Car Stereo Systems mba hividy amin'ny 2018 ho an'ny Under $ 200
Mampiasa ny Lasso Selection Tool amin'ny Paint.NET
Ahoana ny fomba hanovana ny lokon'ny teny iray amin'ny Day sy CSS